192.168.2.1 username & password - 192-168-1-1l.com
waa maxay 192.168.2.1?
192.168.2.1 waa mid ka mid ah cinwaanada IP ugu caansan oo waxaa loo isticmaalaa in galaya in router ee web-interface. Tani 192.168.2.1 Ciwaanka IP: ga waxaa caadi ahaan loo isticmaalo by router qaar ka mid ah.
Marka aad ka soo saaraha ah u iibsato router ah, taas oo u isticmaali cinwaanka this, hubi in cinwaanka IP default waa 192.168.2.1, laakiin ha ka welwelin ku saabsan in - aad si deg deg ah u dhigay kartaa cinwaan IP haboon.
The 192.168.2.1 waa cinwaanka IP default dhigay for router kala duwan, oo ay ku jiraan ku dhowaad dhammaan daydo ka Belkin iyo qaar ka mid ah lagu daydo ka Siemens, Edimax, iyo SMC, si kastaba ha ahaatee, waxaa la beddeli karin.
Sida loo gal iyo Setup Belkin Wireless router Isticmaalka 192.168.2.1?
➥ Connect computer si ay mid ka mid ah 4 Lan ama dekedaha banki
➥ Markaas furo browser web kasta oo gala http://192.168.2.1 galay browser web ee ah cinwaanka bar.
➥ A screen login router waa in ay yimaadaan, ka dibna riix badhanka login iyo password ka tago oo bannaan iyo riix badhanka soo gudbiyaan.
➥ Next, hoos goob wireless riix channel iyo Button SSID
➥ Markaas in Box SSID qori NetVN_2.4G iyo NetVN_5G iyo Riix badhanka codsan isbedel.
➥ click Next on Change password button ammaanka.
➥ Next, hoos Button Internet WAN Riix Nooca Connection iyo calaamadee on doorasho Dynamic iyo riix badhanka soo socda.
➥ Markaas marti nooca Name NetVN_Belkin iyo riix badhanka Codso isbedel.
Haddaba waxaa ku raaxaysan ➥
Login iyo Setup Belkin Wireless router Video
Halkan in this hoos video, waxaad ka heli kartaa Belkin Wireless router Login iyo Setup habka complete, sidaa darteed waa in daawan this video.
Taasi waxay ahayd oo dhan oo ku saabsan 192.168.2.1 Cinwaanka IP Default router Username & password. Waxaan Rajaynaynaa in aad guys u eg this post, laakiin haddii aad soo food saartay dhibaato kasta oo ku saabsan this post, fadlan faallo na waxaan isku dayi doonaa si ay u xaliyaan dhibaatadaada waayo, sida ugu dhakhsaha badan, mahad booqanaya our site.
Post Previous:192.168.1.254 Login router
Post Next:10.0.0.1 login Admin